Crypto-Anarchism: Rindrambaiko maimaim-poana sy ny vola ara-teknolojia, ny ho avy? | Avy amin'ny Linux
Crypto-anarchism: Rindrambaiko maimaim-poana sy ny vola ara-teknolojia, ny ho avy?
Linux PostInstall | | maro
Ny maha-olombelona hatramin'ny nananganana azy ho toy izany, dia niavaka mihoatra ny fivoaran'ny teknolojia, noho izany, ny fandrosoana ara-teknolojia samihafa dia nisy fiantraikany tamin'ny fandrosoan'ny fiarahamonin'olombelona. Ny fitenenana toy ny famakiana, ny fanoratana, ny matematika, ny fambolena, ny haino aman-jery ary ankehitriny ny Teknolojia fampahalalana sy fifandraisana dia ohatra vitsivitsy amin'ny fanovan'ny fivoaran'ny teknolojia ny fomba ifandraisantsika amin'ny alàlan'ny varotra, zavakanto sy siansa, rafitry ny governemanta ary andrin-kery.
Ho setrin'izany, ny filozofia dia misy ary navoakan'ny fampandrosoana ny rindrambaiko maimaimpoana ary ny fitoviana mitovy amin'ny Open Source, na ny fiantraikany amin'ny fivoarana ankehitriny toa ny Cryptocurrencies eo ambanin'ny elo an'ny Blockchain Technology (Blockchain) Manova tanteraka ny fomba fiarahan'ny olona manerana an'izao tontolo izao sy mifanerasera izy io, matetika ivelan'ny fifehezana ny governemanta na ny fahefana ara-toekarena.
1.1 Rindrambaiko maimaim-poana ho an'ny maoderina
2 Famatsiam-bola ara-teknolojia sy Cryptocurrencies
2.1 Blockchain sy Distribution Accounting Technology (DLT)
2.2 Cryptocurrency sy fitrandrahana nomerika
2.3 Fa maninona ny Cryptocurrencies no tena nahomby?
3.2 Mety hisy ve ny governemanta Crypto-Anarchist?
Amin'izao fotoana izao, ny indostrian'ny fampandrosoana ny lozisialy ary ny lozisialy malalaka indrindra dia natsangana tsy misy fisalasalana ho iray amin'ireo fanehoan-kevitra ara-teknolojia-kolontsaina manan-danja indrindra amin'ny ambaratongan'ny olom-pirenena iraisana manerantany, miaraka amin'ny fanamafisana mafy ireo teboka manokana amin'ny planeta.
Ny fakana sary an-tsaina ny fiainana andavanandron'ny olom-pirenena rehetra nefa tsy mifanerasera amin'ny rindrambaiko sasany dia tsy azo atao ankehitriny, na farafaharatsiny asa sarotra atrehana. Tsy misy fitaovana, fitaovana ary sehatra tsy afaka miasa raha tsy misy ny rindrambaiko mety, satria raha tsy misy an'ity fitaovana ity dia tsy afaka mifandray, mifindra na miasa isika, toy ny ataontsika ankehitriny. Ny rindrambaiko no fitaovana fototra iasan'ny fiarahamonintsika.
Rindrambaiko maimaim-poana ho an'ny maoderina
Ary eo amin'ny haavon'ny Rindrambaiko Maimaimpoana ity fanehoan-kevitra ity dia matanjaka kokoa, satria manararaotra izany na filana ilaina mba hahafahana mijanona maotina amin'ny maoderina izay imbetsaka dia lasa teritery be loatra noho ny fandaniana, ny fetrany ary ny fatiantoka amin'ny fampiasana ny lozisialy tsy miankina, indrindra amin'ny faritra eto amin'ny planeta izay tsy ananan'ny mponina firaketan-karena ampy hanohanana azy ireo.
Na manandrana mamolavola na mifehy ny be sy ny maro amin'ny alàlan'ny fampiasana rindrambaiko sasany izay manome, mandray ary / na manao varotra ny angoninay miaraka na tsy mahazo alàlana ny governemanta na sehatra tsy miankina, manafika ny fiainantsika manokana na manodikodina ny hevitsika sy ny zava-misy iainantsika.
Ny fiarahamonintsika, ny maha-olombelona ankehitriny, ny olom-pirenena tsotra, dia tsy maintsy miantoka izany hatrany ny fizotran'ny Fampandrosoana ny lozisialy dia mitazona ny fepetra fa ny rindrambaiko lehibe indrindra dia novolavolaina ivelan'ny orinasa sy ny fahefana ara-barotra, izany hoe, mivoatra tsirairay sy irery.
Izay afaka ampifanaraho amin'ny olona mahay indrindra, ny fepetra dia voatazona fa ampiasao malalaka ny rindrambaiko na inona na inona antony, ary miantoka fa afaka ianaro mba hahalalana ny fomba fiasa, hanatsara azy ary hizara izany amin'ny rehetra.
Ary amin'izao fotoana izao dia mifamatotra tanteraka amin'ireo fahalalahana (4) efatra (XNUMX) an'io fepetra lehibe tena ilaina amin'ny fiarahamonina maoderina io ny Free Software. Tadidio fa ny fahalalahana efatra (4) dia:
Fampiasana: Fahalalahana hampiasa rindrambaiko hahafahana mampiasa azy malalaka na inona na inona tanjony.
Fianarana: Fahalalahana handinika ny fomba nanamboarana ilay rindrambaiko hahitana ny fomba fiasany.
Share: Fahafahana mizara ny rindrambaiko hahazoana antoka fa afaka manampy ny hafa hanana izany isika.
Hihatsara: Fahafahana manova ny singa ao aminy, manatsara azy ireo ary mampifanaraka azy amin'ny filàna samihafa.
Famatsiam-bola ara-teknolojia sy Cryptocurrencies
Miaraka amin'ny fampandrosoana lozisialy maimaim-poana, tato anatin'ny folo taona lasa, nanjary nanerantany ny tany, ary ny fiaraha-monina dia nanjary nifamatotra hatrany tamin'ny alàlan'ny fitaovana ara-teknolojia sy ny tontolon'ny nomerika tamin'ny fomba haingana sy nandroso ary nitohy, ary ankehitriny amin'ny fampiasana ny Blockchain Technology hanome fiainana ny Cryptocurrency voalohany antsoina hoe «Bitcoin» nanelingelina sy niova izy io, ary nanova sehatra politika, sosialy ary toekarena isan-karazany manerantany.
Blockchain sy Distribution Accounting Technology (DLT)
Ny Teknolojia Blockchain sy Distribution Accounting Technology (DLT), amin'ny ankapobeny, dia mametraka revolisiona iray amin'ny rafitra ara-bola, ara-toekarena ary koa ara-politika sy ara-tsosialy taloha.; maka ny fanehoany haingana indrindra ny hafainganana, fangaraharana, fiarovana ary fanaraha-maso ireo rafitra misy ankehitriny sy lany andro izay mitantana ny fampahalalana nomerika amin'ny sehatra toy ny fahasalamana, fanabeazana, fiarovana, varotra, fanamarinana antontan-taratasy, na fifidianana an'ny mpitondra, ankoatry ny hafa.
Ohatra, mikasika ny rafi-pifidianana, ny fitaovana DLT dia afaka manova tanteraka ny paradigma nentin'ny demokrasia; fanamafisana ny fananan'ny vato azo antoka, iraisan'ny rehetra, tsy misy faneriterena ary tsy ekena ny mety hisian'ny demokrasia tsy misy fetra.
Cryptocurrency sy fitrandrahana nomerika
Ary ny momba ny varotra sy ny fampiasana ny Cryptocurrencies, izay raisin'ny olona maro isan'andro isan'andro, fa raha tonga amin'ny toerana iray noraisin'izy ireo be dia be izy ireo, dia hametraka ny rafitra momba ny banky ankehitriny., izay nanome hatrany ny fahatsapana fa manana fomba fanararaotana amin'ny fikirakirana sy fampiasana volam-bahoaka, tsy manisa ireo tsy fanarahan-dalàna marobe (hosoka, fatiantoka) izay matetika no mahazo azy ireo.
Tsy miankina amin'ny ny vokatry ny fahalalahana sy ny fahaleovan-tena ara-bola sy / na ara-toekarena ateraky ny Fitrandrahana nomerika amin'ny olom-pirenena, manasaraka sehatra lehibe iray amin'ny fiankinan-doha sy fanaraha-maso ny sehatra tsy miankina na varotra ampahibemaso.
Fa maninona ny Cryptocurrencies no tena nahomby?
Ny fahombiazan'ny Cryptocurrencies ary ny teknolojia mifandraika amin'izany dia avy amin'ny fahatokisan-tena napetrak'ireo olom-pirenena nifandray tamin'izy ireo. Ary io vokatra na rafitra fitokisana io dia tsy isalasalana fa avy amin'ny zava-misy fa raha te hahomby ny cryptocurrency dia tsy maintsy ho rindrambaiko maimaimpoana.
I mean, ny kaody loharanom-cryptocurrency dia matetika misokatra sy maimaim-poana, ka manome antoka ny mety hisian'ny fanaraha-maso maharitra amin'ny rindrambaiko ary noho izany dia alao antoka fa ny hetsika hosoka dia tsy tanterahina miaraka amin'izy ireo na amin'ny sehatra fanohanana azy ireo (Blockchain / Blockchain), izay tsy inona fa ny boky fitantanam-bola itsinjaram-pahefana izay misy ny fifampiraharahana voasoratra am-pahibemaso na semi -bahoaka sy ny toerana tsy ampifandraisina amin'ny mpampiasa, fa amin'ny adiresy fehezin'izy ireo.
Ny ampahany lehibe hafa amin'ity rafitra ity dia ity birao ity izay blockchain, dia voatahiry ao amin'ireo solosaina tsirairay izay manana teboka feno, izay mahatonga azy io tsy ho azo atao mihitsy ny hanaovana sandoka, izay mandehandeha na voahidy miaraka amin'ny fiarovana avo lenta.
Ary amin'ny fomba ahoana no mifanaraka amin'ny Crypto-Anarchism amin'ny Free Software sy Cryptocurrencies?
Crypto-anarchism amin'izao fotoana izao dia azo faritana amin'ny salan'isa antonony, satria izy io dia hevitra somary vao haingana ary tsy miovaova amin'ny fanovana manerantany, toy ny iray mendrika governemanta maoderina izay tsy mandà ny kapitalisma ankehitriny, fa manaiky azy ho toy ny ratsy ilain'ny olombelona, izay ilaina hihoarana hahatratra ny fahavelomany.
Crypto-anarchism dia mandray / mandray ireo olona sosialista, kominista, kapitalista, demokraty, ankavanana, afovoany, havia, na saika fironana misy ao anatiny, raha toa ka ny fanampiana rehetra avy amin'ny fomba fahitanao an'izao tontolo izao dia farito / tazomy ny Fanjakana / Firenena iray izay ny Governemanta / fahefany misokatra be, marindrano, madiodrano, manana blockchanis, ary autarkic.
Crypto-anarchism dia mampiroborobo olom-pirenena afaka, mahaleo tena ary mamokatra toekarena amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana sy ny fampiasana teknolojia ho an'ny daholobe sy tsy miankina, nasionaly ary iraisam-pirenena, mifototra amin'ny Teknolojia fampahalalana sy fifandraisana ary ny rojom-pifandraisana (Blockchain) hiantohana ny fahatokisana, ny filaminana, ny fahamendrehana, ny fanamarinana, ny hafainganana ary ny tombontsoa hafa ho an'ny olom-pirenena .
Cryptanarchism dia manangana lalàna ara-drariny sy voalanjalanja nefa mahery vaika tokoa, raha manome tompon'andraikitra (fiampangana) mpanao politika tena malemy, izany hoe, tsy misy fahefana sy tombontsoa ara-politika, sosialy ary toekarena lehibe kokoa, hisorohana ny kolikoly na ny fitambaran'ny fahefana.
Raha fintinina, Crypto-Anarchism dia mampiroborobo, mankasitraka ary miantehitra amin'ny fampiasana rindrambaiko Maimaimpoana sy FinTech hihaona amin'ny fanantenana maoderina rehetra an'ny olom-pirenena maoderina., izany hoe, tanjona izy io hanangana modely vaovao miverina amin'ilay maodely efa tonta tamin'ny alàlan'ny teknolojia mba hanajana sy hanomezana antoka ny zon'ny olom-pirenena amin'ny fomba mahomby sy mangarahara, ary ny tena fanehoana ny fanapahan-kevitra na hetsika nataony. amin'ny fahefana napetraka.
Mety hisy ve ny governemanta Crypto-Anarchist?
Ankoatra izany, Governemanta Cryptoanarkista mifototra amin'ny fampiasana mahery vaika an'ireo teknolojia ireo izay tsy voafetra ho an'ny faritany ihany ny sakany. dia afaka mahazo ny fangoraham-po avy amin'ny olom-pirenena maro an'isa izay manana filan-kanina be sady manandrana ny teknolojia vaovao no mandray anjara amin'ny maodely demokratika vaovao, amin'ny ampahany betsaka noho ny toe-piainana ara-tsosialy sy politika ary toekarena mampihoron-koditra izay ahitan'ny firenena sasany ny tenany.
Ho famaranana, Crypto-anarchism dia manana toerana malalaka tsy hita maso, any amin'ny firenena maro izay ny fiaraha-monina dia tsy vitan'ny fitadiavana rafitra demokratika manakorontana sy zaraina., fa manolora fomba fiaina iray izay manohina ny fihevitr'izao tontolo izao sy ny fanaparitahana. Ho avy izay mety tsy hisian'ny fetran'ny fetra ary aiza ny tany manontolo no faritanintsika mitovy, izay ny nomerika sy ny cryptokrasia no filaminan'ny andro.
Raha te-hamaky lahatsoratra mitovy amin'izany ianao momba ny tombontsoa azo avy amin'ny rindrambaiko maimaimpoana amin'ny zom-pirenenanay, tsindrio ity rohy manaraka ity: demokrasia.
Ary farany, raha te hahalala bebe kokoa momba ny Crypto-anarchism ianao, dia misy literatiora maro momba izany amin'ny Internet, saingy afaka manomboka amin'ity rohy ity ianao: Fahalalahana Crypto. Ary satria ny Cryptanarchism dia miorina amin'ny Anarchism, avelako ho anao ity horonantsary ity mba hahafahanao manapaka ny fady na fisafotofotoana momba an'io hevitra io!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Crypto-anarchism: Rindrambaiko maimaim-poana sy ny vola ara-teknolojia, ny ho avy?
Lizer21 dia hoy izy:
Toa toy ny utopia izay taona vitsivitsy miala amin'ny tena zava-misy.
Valiny amin'ny Lizer21
Izany no antony amin'ny faran'ny anaran'ny famoahana milaza hoe: Ny ho avy?
Samy hanana ny tanjony avy ny tsirairay amin'izany ...
Babel dia hoy izy:
Lohahevitra tena mahaliana sy saro-pantarina izay heveriko fa tena tsara ho an'ny fidirana bilaogy.
Somary maharikoriko ahy ny manafangaro tohan-kevitra izay manana ny teny hoe anarchism sy demokrasia. Heveriko fa izany dia misy ifandraisany amin'ny hoe ny anarchisma dia endrika governemanta (na tsy governemanta); angamba any amin'ny toerana sasany, fa tsy crypto-anarchism, dia tsara kokoa ny mampiasa crypto-punk, izay tena akaiky nefa tsy mifantoka amin'ny endrika governemanta mihitsy, fa amin'ny fomba fanao manodidina ny cryptography.
Eny, lahatsoratra tsara ihany.
Mamaly an'i babela
Fanamarihana sy fandraisana anjara tsara, indrindra rehefa milaza ny hetsika cryptopunk, izay navelako tsy nahy tao amin'ity boky ity.
Ary azo antoka fa manan-danja izy ireo amin'ity hetsika iray manontolo amin'ny fiezahana hanova ny tontolon'ny làlana ity ho tombontsoan'ny tsirairay sy ny olom-pirenena, mitaky sy miantoka ny fiainany manokana, ny filaminana ary ny tsy itonona anarana.
Holazaiko fa ny fampifangaroana ny Hetsika Cryptounk sy ny Hetsika Anarkista dia nipoitra tamin'ny Crypto-anarchism, izay mahazo vahana sy tanjaka ankehitriny noho ny fampiasana Cryptocurrencies.
Avelako ho anao ity rohy ity sao dia te hahafantatra bebe kokoa momba ny Hetsika Criptopunk ianao
Ampidiro ao anaty rahona ireo rakitrao amin'ny alàlan'ny Cryptomator amin'ny Linux
Ny fanohanana ny TrueCrypt sy ny veracrypt ao amin'ny Tails 3.9 dia ho tonga amin'ny 5 septambra